Diyaarad ku bur-burtay Dhoobley | Keydmedia
Diyaarad ku bur-burtay Dhoobley
Diyaaraddaan oo sahay u sidday ciidamada Kenya ayaa xalay ku soo dhacday garoonka diyaaradaha Dhoobley, waxaana ku geeriyooday duuliyihii diyaaradda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wararka laga helayo degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in shil diyaaradeed oo sababay khasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac uu xalay ka dhacay gudaha garoonka degmadaas.
Diyaarad laga leeyahay dalka Kenya oo sahay u sidday Ciidamada Kenya ee ku sugan Koofurta Soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay ku bur-burtay gudaha garoonka diyaaradaha kadibna dab uu qabsaday, siday dadka deegaanka xaqiijinayaan.
Ugu yaraan hal ruux oo duuliyihii diyaaradda ahaa ayaa lagu soo waramayaa in uu ku geeriyooday shilka diyaaradda, halka tiro kale oo aan la cayimin ay ku dhaawacmeen.
Warbaahinta gudaha Soomaaliya ayaa qoraya in shilka diyaaraddaan uu sababay cilad ku timid diyaaradda, sida laga soo xigtay goob joogayaal ku suggan aagga shilka ka dhacay, walow aan faah-faahin intaas ka badan aan weli laga helin.
Waa diyaaraddii saddexaad ee laga leeyahay dalka Kenya oo sanadkaan gudihiisa shil ku gasho gudaha Soomaaliya, waxaana shilalkaan is daba jooga ah loo sababeynayaa wedista xirfada duuliyeyaasha diyaaradda iyo cillado kale.
0 Comments Topics: dhoobley jubaland kenya soomaaliya